တခါတုန်းက Tanker ပေါ်မှာ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တခါတုန်းက Tanker ပေါ်မှာ….
တခါတုန်းက Tanker ပေါ်မှာ….
Posted by koyin sithu on Oct 18, 2012 in Creative Writing, Short Story | 22 comments
ကျွန်တော် TANKER သဘောင်္တစ်စီးပေါ်တုန်းကပေါ့……………
ဒီအကြောင်းမပြောခင် Tanker သဘောင်္င်္တွေ ကုန်တင် ကုန်ချလုပ်တာလေး အရင်ပြောမှ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တောတွေက လယ်ထဲမှာ ရေငင်တာ မြင်ဘူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ခပ်မြင့်မြင့် ထောင်ထားတဲ့ ဝါးလုံးအရှည်မှာ တစ်ဖက်က ဝိတ်ထားပြီး တဖက်က ရေငင်ဖို့ ရေပုံးကို ဆင်ထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရေပုံးကို တွင်းထဲနှစ်ပြီး ရေပြည့်သွားလို့ လွှတ်လိုက်ရင် တဖက်က ဝိတ်တုံးက ရေပုံးကို အပေါ်ပြန်ဆွဲတင်ပေးပါတယ်။ Tanker သဘောင်္တွေ အတွက်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်မယ့် Shore က ပိုက်တွေကိုလည်း အဲဒီနည်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Shore ကနေချပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ကို သဘောင်္မှာတပ် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ် အားလုံးပြီးလို့ ပိုက်ပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်ရင် Shore က ပြန်ဆွဲယူသွားပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်လာကြတာ မောင်မောင်ကျော် ဆိုတဲ့ သဘောင်္သား မရောက်ခင် အထိ ဘာပြဿနာမှ မရှိကြပါဘူး။
မောင်မောင်ကျော် ဆိုတာ Tanker သဘောင်္အတွေ့ကြုံ မရှိပေမယ့် သဘောင်္အတွေ့ြှကုံ အတော်အသင့်ရှိတဲ့ သဘောင်္သား တစ်ယောက်ပါ။ လူပုံစံကတော့ ဗေလုဝ ထက်တောင် ပိန်ချင်ပါသေးတယ်။ သူမို့လို့ Boiler suit ဝတ်ထားရင် လူမမြင်ရဘဲ Boiler suit ပဲတွေ့ရလောက်အောင်ပိန်တာပါ။လူကတာ ပိန်တာပါ လေကတော့ အထက်ကနေ နည်းနည်းမှ ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။ အရင် လုပ်ခဲ့တဲ့ သဘောင်္တွေမှာ သူဘယ်လောက် ထိတော်ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း ကတော့တွေ့တဲ့ လူတိုင်းကို ပြောပြတတ်တာ သူ့အကျင့်လိုပဲပြောရမှာပေ့ါ။ ကြာလာတော့လည်း ကျွန်တော်တို့က လေလုဝ ဆိုပြီး နာမည်ပေးလိုက်ကြတော့တယ်။ပြီးတော့ ပြောသေးတာ “ ငါက မင်းတို့လို ပိုက်ဆံမက်လို့ Tanker လိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊ အတွေ့ကြုံ လိုချင်တို့လာလုပ်တာ” ဆိုပဲ။ဒါက သူရောက်ရောက်ချင်းပြောတဲ့ စကားပါ အတွေ့ကြုံ မရှိရင် မရှိဘူးလို့ မပြောဘဲ လေကအထက်ကနေတာ သာကြည့်ကြပါတော့။
ပင်လယ်ပြင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အူးစည်မှ
ဒီလိုနဲ့ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ရင် သဘောင်္က ရှိနှင့်ပြီးသား လူဟောင်းတွေက ပိုက်ဆက်ပိုက်ဖြုတ်လုပ်ပါတယ်။ မောင်မောင်ကျော် ကို ညှာတဲ့အနေနဲ့ သိပ်မခိုင်းကြပါဘူး။ ဒါကိုသူက မကျေနပ်ဘူး ခင်ဗျ၊ သူလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။တစ်ခါတော့သူလည်းဝင်တယ်ဆိုပါတော့၊ ပိုက်ဆက်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ပိုက်ကို ဝိုင်းဆွဲချကြလို့ ဘာပြဿနာမှ မရှိပေမယ့် ကုန်ချပြီးလို့ ပိုက်ပြန်တင်တဲ့ အခါမှာတော့ အားလုံးက မတိုင်ပင်ထားရဘဲနဲ့ သူ့တစ်ယောက်တည်းလွှတ်ပေးလိုက်ကြတော့တယ်။ ပိုက်ကို Shore ကနေအရှိန်နဲ့ ပြန်ဆွဲယူလိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လိုက်ကြီးတစ်ယောက် ယက်ကန်ယက်ကန် နဲ့ ပါသွားလိုက်တာ ဆယ်ပေလောက်ရောက်မှ ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းအော်လို့ Shore ကကြားပြီး ပိုက်ပြန်ချပေးရပါတယ်။ ဒီတော့မှ လေလုဝ တစ်ယောက် သဘောင်္ပေါ် ပြန်ရောက်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ တော်တော်ကို အဆူပြောခံလို်က်ကြရပါတယ်။ မောင်မောင်ကျော် ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို တော်တော်နဲ့ စကားမပြောတော့ပါဘူး သူကြိုက်တာလေးတွေနဲ့ ချော့မှ ပျော့တော်မူပါတယ်။
ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ခုချိန်ထိ Tanker Port တွေရောက်လို့ Cargo Arms တွေမြင်တိုင်း တစ်ယောက်တည်းပြုံးရသလို Tanker သဘောင်္တစ်စီးပေါ်မှာ မိသားစုအတွက် အသက်ပေးသွားတဲ့ မောင်မောင်ကျော် ကို သတ်ိရမိနေတုန်းပါပဲ ခင်ဗျား။ ။
ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ သဘောင်္သားဘဝမှာ တစ်ခါတစ်လေကြုံရဆုံရတာလေးတွေဟာ မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ အမောပြေ ရယ်စရာမောစရာလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲက မှတ်မိနေတာလေးတွေကို အချိန်ရရင် ရသလို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ ကျွန်တော့ရဲ ့စာစုလေးတွေကိုဖတ်လို့ ပြုံးလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဘဲ ကျွန်တော်ရဲ့အားလပ်ချိန်လေးကို အနားမယူဘဲ ရေးရကြိုးနပ်ပါပြီလို့ ပြောပါရစေ။ ။
သီရိမဟာ ဥမ္မာဒန္ဒီ ပပဝတီ ဦးဗြဲရမ်း ဒေါ်ဗလဗွ သမီး ညောင်ရမ်းဂွတို Wow says:
မောင်မောင်ကျော် က ဘယ်လို သင်္ဘောပေါ်မှာ ဆုံးသွားတာလဲလို့
ဟယ် … စိတ်မကောင်းစရာတွေ မဖတ်ချင်ပါဘူးအေ …….
ကိုရင်စည်ရေ အသက်ပေးတဲ့ သင်္ဘောသားဘဝတွေကို ဖတ်ရတိုင်းစိတ်ထဲမကောင်းဘူး ….. သင်္ဘောသား ဆိုလူတွေက ပိုက်ဆံအလကားရတယ်ထင်နေတာ … သူတို့မှာ သင်္ဘောပေါ်တက်တာနဲ့ ကိုယ်အသက်ကို သေမင်းလက်ထဲအပ်ထားလိုက်သလိုပါပဲ ……. Accident တွေမျိုးစုံနဲ့နေနေရတဲ့ဘဝပါ …
ရောင်းရင်းတစ်ယောက်ရေးထားတဲ့ သင်္ဘောသား စာစုလေးတွေကို
ပြန်ပီး ဆားချက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုရင်လည်း စာရေးအားနည်းသွားတာရယ်
ရေးမယ်စဉ်းစားပြီး မရေးဖြစ်တာရယ်ကြောင့်ပါ။ ကိုလေလုဝကတော့ ကိုရီးယားဘက်
Tanker တစ်စီးပေါက်ကွဲမှုထဲပါသွားတယ်ကြားပါတယ်။ သေချာတော့ မသိရပါ။
တခါတရံ Tanker သင်္ဘောတွေမှာ လူရဲ့ ပေါ့ဆချွတ်ချော်၎င်း၊ ကုန်ပစ္စည်းကြောင့်လည်ကောင်း
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တခါတလေကျတော့ ကိုယ့်ကိုယ်တောင် ပြန်တွေးမိပါတယ်…
အချိန်နဲ့ အသက်ကို ရင်းထားရတဲ့ အလုပ်မှာ တခုခုများ ဖြစ်သွားခဲ့ရင်
ခန္ဓာငါးပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကိုယ့်အတွက်တစ်ခုခုတော့ ကျန်အောင်လုပ်ဦးမှပဲလို့…
ပင်လယ် ပျော် says:
ဒီလိုပါပဲ…ရေထဲဆိုတော့လဲ…အသက်တဝက်လောက်က မပိုင်တော့သလိုပါပဲ…gazette ထဲမရောက်တာ ကြာတော့ လူတွေတောင် ဘွဲ ့ထူးတွေနဲ ့ပါလား…
အဂ္ဂမဟာ ဂန္ဓ ဝါစက္က ပဏ္ဍိတ ဘိဝံသ အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာဂုရု ဘဒ္ဒန ္တအူးဘဇင်းဗိုက် says:
ကိုရင်ပြန်လာရင် သင်္ဘောသမီး တစ်ယောက်လောက် ဆွဲခဲ့စမ်းပါ
ကျုပ်ကတော့ သင်္ဘောသီးသမား ပဲ စားချင်တာ …
အမငီး.. အူးဘဇင်းဘိုက်က.. သင်္ဘောသီးတော့စားဖူးဒယ်ဒဲ့..
တော့်.. သများတော့ အူးဗိုက်နဲ့ ထပ်မတွေ့ရဲ့တော့ဖူး…
ကျော်က ဘီအီးအမြဲမူးနေဒါဆိုဒေါ့လေ… အဟီးး
ဒီမှာ သင်္ဘောသမီးက ကျွဲမပဲချိဒယ်… ကျွဲချီးမရား..
သီဟသူရ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာကြီးမိုက် says:
ဟို..ဟို..ဟိုလေ..အဂ္ဂမဟာ ဂန္ဓ ဝါစက္က ပဏ္ဍိတ ဘိဝံသ အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာဂုရု ဘဒ္ဒန ္တအူးဘဇင်းဗိုက်
ကိုရင် ပန်လာရင် သင်္ဘောသမီး တစ်ယောက်လောက် ဆွဲခဲ့စမ်းပါ..သွပ်သွပ်သွပ်..
မဟာသီရိသုဓမ္မ အာကာမိုးမြင့်ကောင်းကင်ဝေယံပျံချီ ဝေဟင်သိမ့်သိမ့်တုန် နှင်းကေသရာလုံမမွန်မွ says:
အင်း..papaya တွေဘွဂလည်း စဉ်းစားကြည့်ရင် စာနာစရာပါ… တူများတွေဂဒါ ပါပါးယားဆို အထင်ကြီးဂျတာ.. အဲ့လိုပိုက်ပိုက်တွေရဘို့ တူဒို့ဘွဂို ဘယ်လိုရင်းထားရလဲဆိုတာ တိဂျဝူး… အနိစ္စ…
အားလုံးဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတော့မှ ဆက်ပြီးတော့သာရေးပေးပါတော့ ကိုရင်ရေ
ချစ်ခင်ရတဲ့ ရွာသူားတွေဘာဒွေဖစ်ကုန်ကြဒါလဲ… ဘွဲ့တွေက ဒီလောက်ရှည်ကုန်ကြပီ…။
ဒါဆို ရွာသဂျီးသာဆို တော်တော်ရှည်မှာပဲနော်.. (ဘွဲ့..ဘွဲ့.. )
>…..< Myanmarcitizen ရေ… အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျ… အူးလေးလား.. အရီးလားမသိလို့… အူးအူးလို့ပဲခေါ်တော့မယ်နော့်..
ပင်လယ်ပျော်&မခိုင်… ကိုရင် ကျိတ်ပြီး အားကျမိတဲ့ သင်္ဘောသီးမောင်နှံပါ။ လင်ကလည်း အရှာတော်
မယားကလည်း စုတတ်ဆောင်းတတ် နားလည်မှုရှိသနဲ့ ဘဲရီးဂွတ်ဒ် …
ဦးမိုက်ကြီး လာအားပေးတာ ရှဲရှဲပါနော့..။ ဒီအရွယ်ထိ နုပျိုရွှင်လန်းတက်ကြွနေတဲ့
ကျော်ဟိန်းနဲ့ တူတဲ့ ဦးမိုက်ကို မြင်တိုင်း ကိုရင်လည်း အဲ့အရွယ်ရောက်ရင် အဲ့လိုနေတတ်ဖို့လိုသပနော့..
ရွာစီစီနီနီယာ ရွာသူကြီး အန်တီရွှေအိမ်စည် လာဖတ်သွားလို့ ဝမ်းသာပါတယ်နော့..
ပါပါရာ-စည်ရဲ့ မွန်လေး အဲလိုစာနာတတ်တာလေးဒွေကြောင့် ဒီက ဂျစ်နေဒါ.. :gee: ပါးပါးယားတွေ ပိုက်ပိုက်ရလို့
အထင်ကြီးတာထက် သူရို့ ဇွဲလုံ့လ စိတ်ရှည်သည်းခံ (ပေခံ) တတ်တဲ့ အရည်အချင်းကို အထင်ကြီးသင့်ပါဒလယ်..
Myanmarcitizen ရေ… အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျ… အူးလေးလား.. အရီးလားမသိလို့… အူးအူးလို့ပဲခေါ်တော့မယ်နော့်..
အပေါ်ပုံကလို သင်္ဘောသမီးတွေ7ယောက်လွတ်လိုက်မယ်
အဘ ခန် ့မှန်းကြည့်ပုံအရတော့
တစ်ခုသော ကမ်းဆိုက်တဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ
သင်္ဘောပေါ်ကို ရောက်လာတဲ့ တစ်ခုထဲသော အဆိပ်သူယောင်သီးလေးကို
အဲဒီ မောင်မောင်ကျော် က သင်္ဘောတစ်စီးလုံးကိုယ်စား
ရှေ ့တန်းက ဝင်စားပေးသွားရှာတယ် ထင်ပါရဲ ့
ရေးတာက.. အလယ်ကအပိုဒ်တွေဖြုတ်ချထားသလား တောင်ထင်ရတယ်..
ပိုက်ဆွဲခံရပြီး.. ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ပါသွားလိုက်တာ. ဟာ.. နောက်တော့ သေပါရောလားဆိုတာမျိုးကြီး..
သင်္ဘောသမီးက.. သင်္ဘောသားတို့နဲ့. မှောင်နှမတော်တာပေါ့နော..
သဘောင်္သားဘဝကလည်း မလွယ်ပါလား အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ဘယ်နေရာမဆို အန္တရယ်နဲ့ လက်တကမ်းအလိုမှာ
အောင်ဆန်းသူရိယ သီဟသူရ သူရ ဗိုလ်ချုပ်တကာ့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ says:
ကရင်စည်ရေ… ကရင်စည်က သင်္ဘောသီးဘွရေး
ကျော်ကလည်း သင်္ဘောသီးများ သင်္ဘောသီးဖြစ်ခွင့်ရရေးအတွက် သင်္ဘောသီးတွေ ဖြစ်တည်လာပုံကို သံပြားဘွကနေ စပြီးရေးကြရင် ပိုကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ… ရေးရမှာ လက်မတွေ့သေးလို့
အားလုံးတော်တန်တိတ်... သဂျီးသမက် ကိုရင်ကြောင်ကြီး says: